ओली विरुद्द दिनरात खटिएका यी नेताहरुको आ-आफ्नो स्वार्थ ! Canada Nepal
ओली विरुद्द दिनरात खटिएका यी नेताहरुको आ-आफ्नो स्वार्थ !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अहिले अफ्ठ्यारो अवस्था सिर्जना बन्दै गएको छ । वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्ने सम्भावना बढे संगै बालुवाटारमा दौड धूप बढ्दो छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार ढाल्ने कोशिस विपक्षी दलहरुले करिब ५ महिनादेखि गरिरहेका छन् तर कुनै पनि हालतमा सम्भव भएको थिएन । विपक्षीहरुको हात बाँधेर राखे झैँ गरेका थिए प्रधानमन्त्री ओलीले जसको एक उदाहरण माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने हिम्मत सम्म गरेन । तर अहिले विपक्षीलाई सुनौलो मौका प्रधानमन्त्री ओली आफैले दिएका छन् विश्वासको मत लिने निर्णय गरेर ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार ढाल्ने मौका वैशाख २७ गते हो यदि ओलीले विश्वासको मत लिन सकेनन् भने तर ओली राजनीतिक खेलाडी हुन् जसले अन्तिम समयमा पासा बदल्न सक्छन । तर आज सम्मको माहोल हेर्दा ओलीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना घट्दो छ ।
नेकपा एमालेबाट २१ बढि सांसदहरुले राजिनामा दिने भएपछी केपी ओलीले विश्वासको मत पाउन गाह्रो भएको छ । जसपामा समेत अहिले उपेन्द्र यादव तर्फ बहुमत भएका कारण ओलीले पाउने साथ संसदमा घट्दो छ । प्रधानमन्त्री ओली विरुद्द अहिले दिनरात खटिएका छन् शिर्ष नेताहरु । ओली सरकार ढालेपछि आ-आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न लागेका छन् केहि शिर्ष नेताहरु ।
पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' : पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले प्रधानमन्त्री ओलीसंग आलो पालो गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने सम्झौता गरेको थिए तर ओलीले कुर्सी नछोडेपछि प्रचण्डले आफूलाई निरिह जस्तो भएका थिए । प्रचण्डले तत्कालीन नेकपा भित्र खेलेर ओली माथी कुर्सी छोड्न दबाब दिए तर सफल हुन सकेनन् । बरु अहिले प्रधानमन्त्री नबनुम तर ओलीलाई सरकार बाट हटाएर अरु जसलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएर प्रचण्ड अहिले दिन रात दौडधूप गरिरहेका छन् ।
उपेन्द्र यादव : प्रचण्ड पश्चात प्रधानमन्त्री ओली विरुद्द दिनरात खटिएका अर्का नेता हुन् जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव हुन् । उपेन्द्र यादवसंग डा. बाबुराम भट्टराई पनि छन् तर बाबुराम पछाडी बसेर उपेन्द्र यादवलाई यो कामको लागि अघि सारेका छन् । केपी ओलीको सरकारमा उपेन्द्र यादव स्वास्थ्यमन्त्री र उप-प्रधानमन्त्री थिए तर केपी ओलीले गरेको सम्झौता पूरा नगरेको साथै आफूलाई काम गर्न सहज समेत नबनाएको कारण उपेन्द्र यादवले राजिनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिएका थिए । त्यही विवाद र चोटलाई मलम लाउने बेला आएकोले उपेन्द्र यादव अहिले खटिएका छन् । उपेन्द्र यादव अहिले राजेन्द्र महतोलाई समेत आफ्नो तर्फ ल्याउने कोशिस गरिरहेका छन् ।
माधव कुमार नेपाल : नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाललाई पार्टी भित्र पेलेर हिंडिरहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ठेगान लाउने बेला यहि हो भनेर माधव नेपाल समेत कुदिरहेका छन् ।माधव नेपालको चाहना अध्यक्ष ओलीले सच्चिएर आफ्नो माग सम्बोधन गरुन भन्ने हो तर ओली नडगमगाए पछि माधव नेपाल समेत ओलीले विश्वासको मत नपाउन भनेर दौड धूप गरिरहेका छन् ।
बैशाख २५, २०७८ शनिवार १७:५२:०९ बजे : प्रकाशित